Dhalada Magnet qaboojiyaha dhalada ayaa noqon kara mid waxtar leh oo magacaaga xayeysiinta ah waa la xasuusan doonaa markasta oo la isticmaalo.
Mawjadahayaga qaboojiyaha ah ee 'Promo-Flex' waa kuwo waara oo qafiif ah - siinta dhiirrigelinta cajiibka ah ee dhacdo ama dhiirrigelin shirkadeed.
Naqshadeynta 2D iyo magnets firinjeerka 3D ayaa ku guuleysta wax aad u caan ah.
Our BOOKMARK HOLLOW iyo taliyuhu wuxuu leeyahay tayo 2D ah, oo laga heli karo dusha dhalaalaya ama mid dhammaystiran. Khadadka ugu gaaban waxay noqon karaan kuwo dhuuban sida 0.01mm iyo 0.12 mm dhumuc, weyna u tahay soo bandhigida sawirro laba-geesood ah oo ku yaal calaamadda buuggaaga.
Qurxinta Kirismaska ​​waxay naqshadeeyaan bandhigyo nalal gaar ah oo loogu talagalay guri kasta iyo guri kasta oo aan qurxinno, soo hel sida aan ugu sameyn karno dhalaalkaaga kirismaska ​​qaab iyo fasal.
Daabac Dijitaal Digital daabac ah
Kuwani biinanka caadada American tayo sare leh waxaan aqbali karnaa naqshadaha caadadii, haddii aad leedahay nashqaddaada kaliya noo soo dir faylkaaga farshaxanka dijitaalka ah, waxaan nuqul ka sameysan doonaa nashqaddaada midabka ah biinanka jilibka ee tayada sare leh oo aan kuu soo gaarsiin doono adiga waqtiga loogu talagalay! la heli karo, waxaan hubin doonnaa tayada wax soo saarka iyo sidoo kale waqtiga hogaaminta wax soo saarka.
Markaad joogtid riwaayad, baarar ama meel gudcur ah, miyaad dareentay nal iftiin ah oo qof ku dhacaya? tani waa cunsur caan ah oo caan ah sannadihii la soo dhaafay - lapel pin.
Dhaldhalaalka madow ee dhaldhalaalka ah ee pin-ka caadada noo ah ayaa qumman marka aad rabto in biinkaagu ka dhex muuqdo dad badan ama mugdiga
Haddii aad fiirisay sameynta biinankaaga dhaldhalaalka, waxaad u badan tahay inaad aragtay ereyada "dhaldhalaalka adag" iyo "dhaldhalaalka jilicsan". Dad badan ayaa qaba su'aal isku mid ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya? Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya dhaldhalaalka adag iyo jilicsanaanta waa jilicsanaanta dhammaatay. Biinanka dhaldhalaalka adag waa fidsan yihiin oo siman yihiin, biinanka dhaldhalaalka jilicsanna waxay kiciyeen geesaha birta. Labada habba waxay adeegsadaan isla wasakhda birta, labaduba waxay yeelan doonaan midabbo dhalaalaya oo firfircoon. Laakiin sidoo kale waxaa jira fursado gaar ah oo gaar u ah dhaldhalaalka jilicsan.
Biinanka dhaqaajiya boodboodka ayaa ah mid ka mid ah naqshadaha gaarka ah ee biinanka, oo ay ku qalabaysan yihiin aalado yar-yar oo fiiqan oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u furto oo aad u xidhato biinanka. Haddii aad leedahay astaamo, qoraal iyo hal ku dhigyo badan oo lagu soo bandhigi karo biinanka, tani waa dalabka ugu fiican maxaa yeelay waxaa jira saddex dhinac oo loo adeegsan karo gudbinta farriinta. In kasta oo tani ay tahay hawl ama fikrad fudud, dhaqdhaqaaqa saxda ah oo habsami leh waxay u baahan tahay xirfado khibrad leh, waxaan ku takhasusay soo saarista biinanka laabta Kuwa soo socdaa waa qaar caan ah ...
Iftiinka LED-ka waxaa lagu dhejin karaa PCB-ga zinc alloy ama pinel lapel bir ah oo aan lahayn, iyo rakibida dhabarka waxay noqon kartaa xajin balanbaalis ama magnet.
Ku dabbaaldeg xafladdaada gaarka ah ee fasaxa sannadkan oo leh calaamaddan xilligan dhalaalaysa ee glowProducts.com.
Waa maxay sababta Sawirrada loo yaqaan 'Etched Pins'? Waa doorashada ugu fiican in la sameeyo biinanka sawirku ku dhegan yahay haddii aad rabto biinanka jilibka fudud ee fudud oo leh faahfaahin cad. Waxay ka duwan tahay biinanka 'Cloisonne', ee la moodaa, Sawirka la sawiray Lapel Pins wuxuu si toos ah naqshadeynta naqshadeynta ugu sameeyay dusha sare ee biraha iyada oo aan lahayn jiingad iyo waxyeello togga ah. Tani waxay kordhisaa xaddiga faahfaahinta ee naqshadeynta soo bandhigi karto. Waxaan bilaabaynaa inaan adeegsanno qalab casri ah oo kumbuyuutar lagu xakameeyo si aan ugu xirno saldhigga birta ee qaabeyntaada. Waxaan markaa buuxinaynaa midabka aad dooratay oo waan gubnay ...